Somaliland.Org » Buug Cusub: Baal-taariikheedkii iyo Suugaantii Af-qallooc
OPINIONBuug Cusub: Baal-taariikheedkii iyo Suugaantii Af-qallooc
July 28th, 2008 Comments Off Buug Cusub: Baal-taariikheedkii iyo Suugaantii Af-qallooc
“Taariikhdu waynoo musbaax maanka caawima’e
Makaankaaga waa inaad taqaan meelba waxa yaalle”……..
Xaaji Aadan Axmed Xasan (Af-qallooc)
Waxa makiinadda wax lagu daabaco qarka u saaran buuggaas oo dhowaan soo bixi doona; haddii uu Eebbe idmo.
Hordhac In badan waxa dareenkayga gudaha u xoqayey sida lisinku mindida u soofeeyo si la mid ah sidii loo daba qabatayn lahaa taariikhda ummadda oo aan mar kasta maankayga ka bixin in baylahdeedu badan tahay, halisna u tahay in wax badan oo ka mid ahi ay u tasoobaan dayac dartiis. Ummad aan taariikh sugan lahayni, waa ummad aan jiritaankeedu sugnayn. Buuggan oo haddaba ku saabsan Sooyaalkii Suugaaneed iyo Baal-taariikheedkii halyeygii waddaniga ahaa ee Xaaji Aadan Axmed Xasan (Af-qallooc) waxa uu ka dhashay dareenkaas werwerku ku takhlan yahay. Taariikhda dadka ayaa sameeya. Ficilada iyo falaadyada aadmiga; maan iyo muruq ahaan; ayaana dhaqan-galka taariikheed geeddi geliya. Xaaji Aadan Af-qallooc oo kale waa ku “dhif iyo naadir” Soomaalida dhexdeeda, waxaana loogu horraysiin karaa foolaadka hal-doorkeenna taariikhda ummadda docdeeda ugu mudan ka kulaalaya
Xaaji Aadan Af-qallooc waxa uu ahaa nin aftahan ah, hiboole codkar ah, waddani Alle ka cabsi badan oo waaya arag ah, dal-mareen qurbaawi ah, meelna ku weeleeyey oo isugu keenay aqoon ka soo jeedda dhaqammo iyo ilbaxnimooyin kala geddisan. Gabayada Xaaji Aadan Axmed Xasan waxa ay noqdeen caroog iyo dawan cod dheer oo guubaabiya, kiciyana shucuurta iyo dareenka waddaniga ah ee dadka Soomaalida. Badheedhe cad oo diidmo ah ayuu kala hor tegey gumaysigii Ingiriiska ee Somaliland maamulayey. Arrintaas oo uu kala kulmay handadaad badan iyo xadhig marnaba kuma aanay keenin inuu joojiyo gayllankii iyo guubaabadii gabayadiisa ilaa laga gaadhey gobannimadii 1960. Ilaa geeridiisii (1986) waxa uu Xaajigu u taagnaa kaalinta hogatuska ee hagaagsanaanta, wax hagaajinta iyo is-hagaajinta.
Indhahaysku aragtaan cadaawaha iskaga eega
Is aamina dannigu waa waxaad ku ibtilowdeene
Is aqbala qabiilnimada waad ku ambanaysaane
Is addeeca uurxumidu waa aayatiin li’iye
Itifaaq la’aan laguma helo lib iyo iimaane
Abtirsiinyo reer hebela’ iyo oday ku faan tuura
Xaaji Aadan Af-qallooc waxa uu had iyo goor Soomaalida ugu baaqi jirey isku duubni, is-waansi, is-daawaysi, is-kaashi, isku kalsoonaan, tabcasho iyo wax qabsasho, waxaanu uga digi jirey kala tag, tafaraaruq, qabyaalad, eex, qaraabakiil, musuqmaasuq, meel iska kuudud, iska fadhi iyo wax taransi la’aan (ma shaqaystennimo). Qiimaha iyo tayada sarraysa ee Xaaji Aadan lahaa, hal-doornimadiisa, indheer-garadnimadiisa iyo qayuurinnimada hal-muceedka ah ee hal-abuurkiisa qiirada miidhan ah waxa lagala soo dhex bixi karaa gabayadiisa badan ee xilligii gobannimo-doonka iyo xilliyadii ka dambeeyey ee dawladihii sibilka ama rayadka ahaa iyo waayadii kacaannimada, gabayadaas oo intooda badan loogu tegi doono oboc weynta buuggan ee dhowaan dhaayihiinna hor iman doona.
Saddex marxaladood oo xidhiidhsanaa oo dalka iyo dadkuba soo mareen ayay gabayada Xaaji Aadan Af-qallooc si sokeeyennimo ah u gorfaynayaan, waxanu Xaajigu ahaa hal-abuur si qotodheer ugu fiirsada oo dhug u yeesha dhacdooyinka ka ilmo roganaya halku uu ku nool yahay. Waxa uu ahaa goobjooge si wanaagsan u falanqeeya oo gabay ku faalleeya wixii maanta dha